Saad Scalper EA - Best Forex ny EA | Expert Advisors | FX Robots
Saad Scalper EA dia iray amin'ny fomba feno automated Forex Expert Mpanolotsaina ary mitantam tetikady roa tamin'izany andro izany tsy manam-paharoa sy ny fomba hanaovana ankamaroan'ny po mahasoa.
izany Forex EA Ny scalps dia manomboka amin'ny paikady matanjaka.
Po izay tsy mahomby ny loha no ampiasaina ao amin'ny hafa, ary tsy manam-paharoa fomba hifehezana hitsiny fatiantoka.
Izy io dia miasa amin'ny vola indraindray ary ny vokatra tsara indrindra hita EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDCAD ary AUDUSD. Ampiasao ho efatra na dimy vola mety tsiroaroa ho an'ny fitomboana.
EURUSD M1 for avo fitomboana
EURUSD M5 kely indrindra mety ho an'ny fitomboan'ny
GBPUSD M1 for avo fitomboana
GBPUSD M5 kely indrindra mety ho an'ny fitomboan'ny
USDCHF M5 kely indrindra mety ho an'ny fitomboan'ny
USDCAD M5 kely indrindra mety ho an'ny fitomboan'ny
AUDCAD M5 kely indrindra mety ho an'ny fitomboan'ny
Saad Scalper EA - Torohevitra
Torohevitra hampiasana VPS ho an'ny 24 / 7 mihazakazaka ny varotra an-tsena mba hisorohana ny famonoana ny mpanjifa aty an-trano.
Aza fanapahan-kevitra manan-danja ara-barotra nandritra ny avy any US Federasiona sy ny Banky Foibe Eoropeana.
Lehibe isaky ny varotra - Default value 0.01. Asio araka ny hitsiny.
LotModeAuto - Mametraka diso / marina araka izay takinao.
% Loza - Ny Lot dia isaky ny isan-isan-karazany Lot = AccountEquity * Risk / 100 / 1000 Raha toa i LotModeAuto no mametraka True. Design Lot size araka ny fangatahanao sy ny zava-misy.
Target Pips Ny sanda tsara indrindra hita 100 ho an'ny 5 Decimal Broker ho 10 anao. Ampidino araka ny valin'ny fitsapana anao.
Stop Loss - Default Value dia 0. Tsy miasa afa-tsy raha voapetraka ho False izy roa. Raha araka ny valin'ny fitsapana dia tsy voatery izy io. Io endri-javatra io dia tafiditra ao anatin'ny fangatahan'ny mpisera hafa. Ampiasao izany araka ny traikefanao.
No isa - Ny isa majika dia tokony ho miavaka amin'ny terminal MT4.
Ampiharo ny karazana Martingale
Market Order Martingale - Marina / Diso
Pending Order Martingale - Marina / Diso
Mariho fa: Afaka mampiasa Martingale iray monja amin'ny fotoana iray ianao. Raha samy marina ireo, dia tsy miasa ny martingale. Raha te hampiasa ny endri-tsoratr'i StopLoss ianao dia mitandrina foana. Raha misy marina, ny endri-javatra StopLoss dia tsy miasa.
3 fototra fototra - Mametraka Parameter ho an'ny Order Order Martingale
Dingana manaraka: Valin'ny Default 500 ho an'ny 5 Decimal Broker ho 50 Pips. Azonao atao ny mamolavola azy araka ny fijerinao ny habeny Lot Size, Equity ary Currency Pair Cost Movement amin'ny fampiasana azo antoka ny martingale mba hisorohana ny Margin Call.
4 fototra fototra - Mametraka parameteran'ny fandefasana filaminana Martingale
Dingana amin'ny Pips - Valin'ny Default 700 ho an'ny 5 Decimal Broker ho 70 Pips. Azonao atao ny mamolavola azy araka ny fijerinao ny habeny Lot Size, Equity ary Currency Pair Cost Movement amin'ny fampiasana azo antoka ny martingale mba hisorohana ny Margin Call.
Open Order Pending - Default value 400. Izany lanjany izany dia miankina amin'ny Dingana ao amin'ny Pip.
Ohatra 1 Varotra - Raha ny Didy am-boalohany dia Sell ary ny vidiny dia miakatra ny 700 mihoatra ny ambaratongam-pamolavolana voalohany Pending Order Sell dia natomboka ny dingana 400 mihoatra ny haavon'ny Sell teo aloha.
Ohatra 2 Buy - Raha ny fividianana tany am-boalohany dia mividy ny dingana 700 ambanin'ny ambaratonga orina tany am-boalohany Pending Order Buy dia natomboka 400 ambaratonga ambany alohan'ny Sell Level teo aloha.
Tapitra ny fotoana andrana - Ampidiro ny fandefasana ny fandefasana fotoana fohy amin'ny andro. Default value 30 andro.
Ampidiro ny Volan'ny Filamatra
Ampiharo ny sivana volafotsy - Marina / Diso
Haavon'ilay boky - Amboary raha toa ka marina ny filalaovan'ny Volana.
Ny Volan'ny Volana dia nampidirina mba hisorohana ny varotra rehetra mandritra ny fihenan-dàlana sy ny fihenan'ny varotra.
Basic variable variable 6 - Varotra fitambaran'ny Haingo amin'ny GMT
Varotra boribory ny famantaranandro 24Hr - Marina / Diso
Atombohy ny ora ara-barotra ao amin'ny Hr 0
Atsaharo ny fotoana fivarotana any Hr - 23
Apk Trader Ohb Review